FIANGONANA FAHEFATRA: TYATIRA - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
7 septembre 2020 28 octobre 2020 admin
FIANGONANA FAHEFATRA: TYATIRA Ny Tombo-kase faharoa :Ny soavaly hatsatra
Apokalypsy 2:18-29 «18 [Tyatira] Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana* any Tyatira: Izao no lazain’ny Zanak’Andriamanitra, Izay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano: 19 Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. 20 Kanefa manan-teny aminao Aho, satria ianao mandefitra amin’ilay vehivavy Jezebela, izay milaza ny tenany ho mpaminanivavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin’ny sampy. 21 Ary nomeko andro hibebahany izy, nefa tsy mety mibebaka amin’ny fijangajangany izy. 22 Indro, hampandamahiko eo am-pandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia hataoko ao amin’ny fahoriana lehibe, raha tsy hibebaka amin’ny asan-dravehivavy izy. 23 Ary hovonoiko amin’ny fahafatesana ny zanany; ary ny fiangonana* rehetra hahalala fa Izaho no mandinika ny voa sy ny fo; ary homeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. 24 Fa aminareo izay sisa any Tyatira, dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon’ireo hoe « sain-dalin’i Satana », dia izao no lazaiko: tsy hovesarako entana hafa ianareo; 25 kanefa izay anananareo dia tano mafy mandra-pihaviko. 26 Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin’ny farany dia homeko fahefana amin’ny jentilisa; 27 ary hiandry azy amin’ny tehim-by izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa noraisiko tamin’ny Raiko. 28 Ary homeko azy ny kintana fitarika andro. 29 Izay manan-tsofina, aoka izyhihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana*.»
Apokalypsy 6:7–9 «7 Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahefatra, dia reko ny feon’ny zava-manan’aina fahefatra nanao hoe: Avia*. [* Ampio hoe: (ka izahao)] 8 Ary hitako fa, indro, nisy soavaly hatsatra, ary ny anaran’izay nitaingina ary atao hoe Fahafatesana, ary ny Fiainan-tsi-hita* nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin’ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin’ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibi-dia ety an-tany. [* Gr. Hadesy] 9 Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy, dia hitako teo ambanin’ny alitara ny fanahin’izay voavono noho ny tenin’Andriamanitra sy ny filazana izay nohazoniny. »
Ny soavaly dia maneho ny firaisan‟ny mpino; Ny lokony kosa dia manambara ny toetoe-mpianinan‟ireo fiangonana ireo sy ny zavatra hanjo azy sy ny zavatra hiainany, Ny mitaingina azy dia maneho ny fahefana mitondra io fiangonana io, na ny rafim-pandaminan‟i fiangonana io, na ny toetoem-piainana an‟io fiangonana io. Ka ny mitondra azy no mibaiko ny rafim-pandaminana izay mifehy ny fiangonana.
Ny hevitry ny loko hatsatra
Rehefa maty ny olona iray dia lazaina hoe hatsatra, ka eto izany ity saoavaly hatsatra ity dia hita fa ny mitaingina azy koa, dia mbola lazaina hoe “FAHAFATESANA”.
Dia jereo tsara ny tantaran‟ny Tyatira, fa niseho tamin‟ny taona 538 – 1517. Ny soavaly mifanandrify aminy dia ny soavaly hatsatra, ny fiainan‟ny mpino mihitsy izany no hatsatra, izany hoe maty ara-panahy ilay mpino, maty ihany koa izy ara-nofo, satria izay rehetra manohitra ny fampianaran‟ny Tyatira, fahafatesana no miandry azy. Izany dia zavatra efa voasoratra ao amin‟ny tantara avokoa fa sao dia hisy sahy hilaza hoe: “io rangahy io ve dia tsy manan-javatra ho lazaina hafa tsy hanenjika ny hafa fotsiny ihany”. Tsy izany mihitsy fa tena voasoratra amin‟ny tantara mihitsy izany toy ny tantara rehetra.
NY HEVITRY NY TENY FAMONOAM-PANATITRA (fitondrana fanatitra ho vonoina)
NY VANIMPOTONA NAHITANA NY TANTARA Taonjato faha 5 -15 na ny taona 538 ka hatramin‟ny taona 1517
AHOANA NY TANTARAN’NY FIANGONANA?
Io dia fiangonana nisy tokoa tamin‟ny andron‟ny apostoly tahaka ireo fiangonana hafa ireo, fa saingy ity fiangonana ity kosa, dia nangalan‟i Jesosy Kristy ohatra ho an‟ny tantaran‟ny fiangonana ho avy. Satria moa izany no lazain‟i Jesosy Kristy ao amin‟ny Apokalypsy 1:19 « Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay, »
Izany hoe: misy zavatra ankehitriny izany ao anatin‟ny tantaran‟ity fiangonana Tyatira izay efa hitan‟i Jaona ity. Izany hoe, efa nisy fiangonana Kristiana efa hitan‟i Jaona izany tao. Fa io zavatra hiainan‟ny fiangonana Tyatira hitan‟i Jaona io, dia mbola hiseho amin‟ny tantaran‟ny fiangonana mbola ho avy ihany koa, ka dia niseho tokoa taty amin‟ny taon-jato faha 5 ka hatramin‟ny faha 15 izy ity. Raha amin‟izao vanim-potoana hiainantsika izao izany, dia zavatra efa lasa io zavatra voalaza io, fa raha tamin‟ny vaninandro izay niainan‟i Jaona azy kosa dia zavatra mbola ho avy izany tantaran‟ny fiangonana izany, ka ny zavatra nisy tao amin‟ny fiangonana Tyatira tanàna no endrika nampitany azy.
Apokalypsy 2:18 – 29 «18 [Tyatira] Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana*[* Gr. eklesia] any Tyatira: Izao no lazain’ny Zanak’Andriamanitra, Izay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano: 19 Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. 20 Kanefa manan-teny aminao Aho, satria ianao mandefitra amin’ilay vehivavy Jezebela, izay milaza ny tenany ho mpaminanivavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin’ny sampy. 21 Ary nomeko andro hibebahany izy, nefa tsy mety mibebaka amin’ny fijangajangany izy. 22 Indro, hampandamahiko eo am-pandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia hataoko ao amin’ny fahoriana lehibe, raha tsy hibebaka amin’ny asan-dravehivavy izy. 23 Ary hovonoiko amin’ny fahafatesana ny zanany; ary ny fiangonana*[* Gr. eklesia] rehetra hahalala fa Izaho no mandinika ny voa sy ny fo; ary homeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. 24 Fa aminareo izay sisa any Tyatira, dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon’ireo hoe « sain-dalin’i Satana », dia izao no lazaiko: tsy hovesarako entana hafa ianareo; 25 kanefa izay anananareo dia tano mafy mandra-pihaviko. 26 Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin’ny farany dia homeko fahefana amin’ny jentilisa; 27 ary hiandry azy amin’ny tehim-by izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa noraisiko tamin’ny Raiko. 28 Ary homeko azy ny kintana fitarika andro. 29 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana*. [* Gr. eklesia] »
SONIA NA ENTETE NA FAMANTARANA Apokalypsy 2:18 “Ny Zanak’Andriamanitra, Izay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano”. Apetrany indray izany, fa mbola ilay Jesosy Kristy eo amin‟ny voninahiny ihany no tompon‟ny fanambarana eto. Ka eto dia sarasarahiny ny filazana ilay endriny any amin‟ny voninahiny, fa tsy nataony iray manontolo, satria efa hita taty amin‟ny toko voalohany izany. Dia mazava tsara izany, fa dia hanaporofo ny fahamarinan‟ny faminaniana, izay efa nolazain‟i Jesosy Kristy isika, ato amin‟ity bokin‟ny Fanambarana ity. Fa milaza zavatra mbola ho avy Izy tamin‟izany, fa amin‟izao vanim-potoana hiainantsika izao, dia efa lasa izany rehetra izany. Ka dia hohamarinintsika hoe: marina ve ny zavatra lazain‟i Jesosy Kristy tamin‟izany?, Ka dia mbola vao ety ampiandohana, dia efa miala sahady izaho Pasitera Mailhol, fa tsy izaho no nanao ny fanambarana, fa i Jesosy Kristy no nanao ny fanambarana. Satria izaho Pasitera Mailhol dia tsy mba tahaka ny varahina ny tanako sy ny tongotro, fa ny hany ety amin‟ny tanako dia peratra mariazy volamena; ny masoko tsy mba sahala amin‟ny lelafo izany, fa maso tsotra fotsiny ihany, fa ireo devoly ireo no mahita ny masoko ohatra ny lelafo rehefa roahina izy ireo, fa isika tsy mahita an‟izany. Ka ny tiako ahatongavana izany dia izao: tsy i Pasitera Mailhol no tompon‟ity fanambarana ity, ka raha misy fankasitrahana omen‟i Jesosy Kristy eto, dia i Jesosy Kristy no tompon‟izay fa tsy i Pasitera, ary raha misy fanankiana omeny eto, dia an‟i Jesosy Kristy izany fanankianana izany fa tsy an‟i Pasitera Mailhol. Ohatra Rasalama maritiora, i Ralaimazoto ihany koa dia maty maritiora, izay nenjehin‟ny mpanjaka Ranavalona faharoa. Raha tany amin‟ny tantaran‟ny fiangonana Smyrna sy Efesosy isika dia nahita, fa ny mpitondra fanjakana no nanenjika ny mpivavaka, fa rehefa tonga kosa ny taty amin‟ny fotoana fiangonana Tyatira, dia tsy ny mpitondra fanjakana intsony no nanenjika ny mpivavaka, fa ireo mpitondra fivavahana ihany no manenjika ireo mpivavaka hafa manohintohina ny tombotsoany na ny fampianarana tsy izy rehetra afafiny.
Izany no nahatonga ny soavaly hoe hatsatra satria fahafatesana no nanaraka azy, ary ny fiainan-tsi-hita no nanaraka azy. Ary nomena fahefana izy tamin‟ny ampahefatry ny tany mba hamono sy handripaka an‟ireo.
Iza moa io ampahefatry ny tany izay resahiny eto io?
Tsy iza io fa ny Europa dia ampahefatry ny tany resahiny eto Satria raha vao nanomboka tafapetraka amin‟ny seza fiandrianany sy ny fanjakany ity fiangonana Tyatira ity, dia mbola tsy nivelatra tany amin‟ny tany maro aloha izy. Mbola tsy nisy taty afrika, mbola tsy nisy tany azia, tsy mbola nisy tany amerika, fa mbola tao Europa ihany no nivelarany. Ka tao Europa izay rehetra tao ambany fahefany, dia nananany fahefana daholo ny namono azy, ka na inona na inona no nikitikitika ny fampianarany dia fahafatesana no miandry azy.
Ny mpitaingina ny soavaly hatsatra moa dia nomena sabatra, ary ny fiainan-tsi-hita no manaraka azy. Izany hoe ny helo sy ny fahafatesana izany no manaraka azy. Izany no zavatra mitranga ato amin‟ity fiainan‟ny fiangonana Tyatira ity, raha ampitahaina aty amin‟ny toko faha 6, fa aty amin‟ny toko faha 2 sy faha 3 dia maneho ny tantaran‟ny fiangonana amin‟ny lafiny ara-panahy. Fa ny aty amin‟ny toko faha 6 kosa indray dia tena maneho ny fiainan‟ny fiangonana tamin‟ny lafiny ara-nofo mihitsy, izany hoe zavatra niainan‟ny Kristiana mihitsy tamin‟ny lafiny ara-nofo sy fijoroany manoloana ny fanenjehana sy ny zavatra mety ho nahazo azy.
Io ilay lazain‟ny apokalypsy hoe “ilay sisa vitsy aminareo Tyatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon’ireo hoe sain-dalin‟i Satana », dia izao no lazaiko: tsy hovesarako entana hafa ianareo; »
apokalypsy 2:25 « kanefa izay anananareo dia tano mafy mandra-pihaviko. »
Dia izao koa no hilazany azy aty amin‟ny apokalypsy 2:26 – 29 «26 Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin’ny farany dia homeko fahefana amin’ny jentilisa; 27 ary hiandry azy amin’ny tehim-by izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa noraisiko tamin’ny Raiko. 28 Ary homeko azy ny kintana fitarika andro. 29 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana »
“Izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin’ny farany”, izany hoe: izay mahatoky hatramin‟ny fahafatesana ao anatin‟io tantaran‟ny fiangonana io izany dia hiandry azy amin‟ny tehim-by izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa noraisiko tamin’ny Raiko.
Apokalypsy 2:28 « Ary homeko azy ny kintana fitarika andro. »
Izany hoe mpandresy tokoa ianao izany, dia azo antoka fa ho azonao ny lanitra. Dia nisy tokoa izany ny vahoaka Kristiana izay tena niaritra, ka nahatoky hatramin‟ny fahafatesana ka lasa maritiora tamin‟ny fanarahana an‟i Kristy.
Ireo dia tsy mba niray petsapetsa tamin‟izany saindalin‟i satana izany, ka hoe sady nivavaka no nanantona ombiasa, satria dia misy tokoa ny sady mivavaka no nanantona mpisikidy, sady nivavaka no nanantona moasy, nefa nisy olona tena tsy nanantona an‟izany mihitsy, ary tsy niditra tamin‟izany mihitsy, fa tena nitoky tanteraka tamin‟ny herin‟Andriamanitra fotsiny ihany.
“Ka raha maharesy ianao, dia miverena amin‟ny fitiavana voalohany”, dia miverina hatrany io hoe “izay maharesy io”, na tamin‟ny tantaran‟ny fiangonana Efesosy, na tamin‟ny Smyrna dia teo io, ary teo amin‟ny Pergamosy dia mbola eo ihany koa io, tonga eto amin‟ny Tyartira dia mbola miverina eo ihany koa io. Izany hoe ny tantaran‟ny fiangonana izany dia misy ady hatrehina foana, ary napetraky Jesosy Kristy tsara, fa ady izany manaraka ny fahamarinana izany, satria dia hiatrika fanenjehana sy fanankianana sy fanompana sy fanapotehana amin‟ny lafiny rehetra mihitsy aza fa izay maharitra hatramin‟ny farany kosa no aharesy.
NY FIDERANA AZY, NA FANKASITRAHANA AZY
Apokalypsy 2:19 « Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. » Io izany no fankasitrahan‟i Jesosy Kristy an‟ity fiangonana ity sy ny fiderana azy. Izany hoe sady niasa izany ity fiangonana ity no nanana fitiavana, nanana finoana, no sady nanompo ihany koa, ary dia niaritra zavatra mahamay ihany koa.
NY FANANKIANANA NATAO AZY
Apokalypsy 2:20 – 23 «20 Kanefa manan-teny aminao Aho, satria ianao mandefitra amin’ilay vehivavy Jezebela, izay milaza ny tenany ho mpaminanivavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin’ny sampy. 21 Ary nomeko andro hibebahany izy, nefa tsy mety mibebaka amin’ny fijangajangany izy. 22 Indro, hampandamahiko eo am-pandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia hataoko ao amin’ny fahoriana lehibe, raha tsy hibebaka amin’ny asan-dravehivavy izy. 23 Ary hovonoiko amin’ny fahafatesana ny zanany; ary ny fiangonana* rehetra hahalala fa Izaho no mandinika ny voa sy ny fo; ary homeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. [* Gr. eklesia] »
Apokalypsy 2:24 – 25 «24 Fa aminareo izay sisa any Tyatira, dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon’ireo hoe « sain-dalin’i Satana », dia izao no lazaiko: tsy hovesarako entana hafa ianareo; 25 kanefa izay anananareo dia tano mafy mandra-pihaviko. »
Apokalypsy 2:26 – 29 «26 Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin’ny farany dia homeko fahefana amin’ny jentilisa; 27 ary hiandry azy amin’ny tehim-by izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa noraisiko tamin’ny Raiko. 28 Ary homeko azy ny kintana fitarika andro. 29 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana*. [* Gr. eklesia] » Raha mijery izany isika ny tantaran‟ny Tyatira, dia tena izay tokoa no zavatra nisy amin‟ny maha tanàna azy. Izany hoe ity fiangonana tao Tyatira ity, dia tena niasa ho an‟ny Tompo mihitsy: Apokalypsy 2:19 « Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. » Izany hoe: tena arakaraka ny hanompoany an‟i Jesosy Kristy izany, no tena nahavitany zavatra lehibe tokoa. Ka raha zavatra kely no niaingany tany aloha, dia nahavita nihitatra tamin‟ny toerana maro tokoa izy tato aoriana, tamin‟ny fanompoana an‟i Kristy, na tamin‟ny asa soa nataony, na ny fitiavany. Fa ny olana amin‟ity fiangonana Tyatira ity, dia ilay fanankianana nomen‟i Jesosy Kristy azy, dia ny hoe: “nandefitra tamin‟ilay vehivavy Jezebela”
Raha mijery ny tantaran‟ny fiangonana isika tao anatin‟io vanim-potoana taona 538 -1517, satria io tokoa ny tantaran‟ny fiangonana.
Raha jerena izany ny fizotry ny tantaran‟ny fiangonana niainga tamin‟ny fiangonana apostolika, Efesosy sy Smyrna, dia nisy karazana tetezamita nandalovana teo amin‟ny fiangonana Pergamosy, izay niditra tany amin‟ny fivavahana kristiana amin‟izay, satria tapitra ny fiangonana apostolika, dia niditra tamin‟ny fiangonana kristiana tanteraka amin‟izay. Ny tantaran‟ny fiangonana nisy teo amin‟ny Pergamosy no tetezamita nampitohy ireo. Ka raha jerena izany ny fivoaran‟ny tantara, dia ity taona 538 ka hatramin‟ny 1517 ity dia vanim-potoana nipoiran‟ny fivavahana katolika, ka nahatonga azy ho lehibe sy nieli-patrana eran‟izao tontolo izao. Raha somary tohizantsika kely ny tantaran‟ny fiangonana dia ahita isika fa ny fiangonana Sardisy no fiangonana faha dimy, ary rehefa hijery sy hanadihady an‟io isika dia hijery ny tantaran‟ny fiangonana protestanta.
Ny fiangonana faha enina kosa indray dia ny fiangonana Filadelfia, ka rehefa hijery azy io isika, dia hijery ihany koa ny fiangonana sekta indray. Ka raha raisina izany ny tantaran‟ity fiangonana Tyatira ity, ka ho jerentsika izay fiangonana mahafeno ny fepetran‟izy ity na eo amin‟ny tantaran‟ny fiangonana, na eo amin‟ny taona nipoirany no jerena, taona 538 – 1517 no ahitana fa ny fiangonana katolika no resahina ato amin‟ity fiangonana Tyatira ity. Dia misy fankasitrahana nomen‟”Ilay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano” an‟ity fiangonana ity izany eto: Apokalypsy 2:19 « Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. » Izany hoe: raha mijery izany isika ny tantaran‟ny fiangonana katolika dia fantatry Jesosy Kristy tsara mihitsy ny asa fanompoana, sy ny fitiavan‟izy ireo ny asan‟Andriamanitra izany, ary ny finoany sy ny fanompoana, ary ny faharetana izay nananan‟ireto fiangonana ireto. Raha raisintsika ohatra hoe “ny asanao sy ny fitiavanao”, dia jereo tsara fa, raha misy olona malemy fanahy sy manam-pitiavana amin‟ny fiantrana, sy ny fiarovana ny amin‟ny maha olombelona, ka nihavian‟izany Zon‟olombelona izany, dia ny fiangonana katolika no anisan‟ny voalohany amin‟izany: ny fitsaboana mahantra, ny fiantrana mahantra, na any amin‟ny toeram-pitsaboana isan-karazany, ka raha mbola fantatry ny olona fa misy an‟io fanafody io any amin-dry Mopera na ry Masera, dia aleon‟ny olona manantona mankany. Na ny fiantrana mahantra, na amin‟ny trano na fitafy dia samy ahitana an‟izany avokoa. Ohatra ry Mopera Pédro, firifiry akory ny isan‟ny vahoaka hiantran‟i Mopera Pédro, dia tena asa tsara avokoa anie izany rehetra izany e! eo koa ny sekoly, dia saika ny ankabeazan‟ny olona ambony sy manam-pahaizana, dia saika nivoaka avy tamin‟ny sekoly katolika avokoa.
Ary izahay izao dia mba isan‟ny nivoaka tamin‟izany, i Pasitera Mailhol dia nianatra tany amin‟ny sekoly katolika, ary dia lasa olo-malaza mampianatra ny boky apokalypsy, dia tena mamoaka olo-malaza mihitsy anie izany ny fiangonana katolika, ny asany, ny fanompoany, ny finoany. Ary ny Eglizy Katolika dia fantatsika tsara fa mino an‟i Jesoa Kristy izy, mino an‟Andriamanitra izy, mino an‟dry masindahy Josefa, masindahy Paoly, masimbavy Marie Thérese, masimbavy Victoire Rasoamanarivo, ry masina Maria, sy ny rehetra rehetra, mino an‟izany ny eglizy katolika. Ny asa fanompoany sy ny fitiavany dia tena ngeza be, ary tsy misy mahavita ny vitan‟ny katolika ireo fiangonana Kristina hafa rehetra ireo. Ary dia tena fantatry Jesosy izany, nankasitrahany izany ary nomeny voninahitra izany, “ary dia ny asany farany hoy izy dia lehibe noho ny voalohany.”
Efa hitantsika teo fa ity fiangonana Tyatira ity dia fantatry Jesosy Kristy tsara ny asany sy ny fitiavany, sy ny finoany sy ny fanompoany sy ny faharetany, teo amin‟ny Jesosy Kristy, satria raha tany ampiandohany dia mbola mafy ihany ny zavatra niangan‟ity fiangonana ity. Toa izany koa ohatra ny fiangonana Apokalypsy raha tany ampiandohana dia misy zavatra mafy nefa dia fantatry ny Jesosy Kristy tsara mihitsy ny fitiavany, ny asany, ny fanompoana, ny fitoriana ny bokin‟ny apokalypsy, ny finoany tsy azo hozongozonina, ny faharetany; Fa ity fiangonana Tyatira ity tamin‟izany, dia vetivety tokoa dia nivelatra, ary dia nanao asa soa, ary hatramin‟izao mbola mitohy izany asa soa izany, toy ny fiompiana, ny fambolena, ny fampianarana, ny fitsaboana amin‟ireny toeram-pitsaboana maro samihafa ireny. Asa soa maro isan-karazany no nataon‟ity fiangonana ity maro tokoa ny zanak‟olombelona nahazo tombotsoa taminy. Kanefa na dia nanana izany toetra tsara maro izany aza izy, ka nolazain‟i Jesosy Kristy fa hoe ny asanao farany dia be noho ny voalohany, izany hoe: raha mbola kely dia kely izy tany ampiandohana, dia taty aoriana izy dia tena lasa lehibe dia lehibe tokoa, ary dia tsy takatry ny saina mihitsy no firoboroboan‟ity fiangonana ity taty aoriana, kanefa dia nokianiny izy ity taty aoriana: Amin‟izao fotoana izao dia tena manerana ny tany ny fihitaran‟izany fiangonana katolika izany, ary maro ny vahoaka nahita soa tamin‟izany, ary nahazo tombotsoa tamin‟izany fiangonana izany, ary na ianao mamaky ity boky ity koa aza mba anisan‟ny nahazo tombotsoa tamin‟izany fiangonana izany. Kanefa na izany aza nisy ihany koa ny fanankianana izay nomen‟i Jesosy Kristy azy ity, na nahavita zavatra lehibe sy tsara aza izy, dia ankasitrahany ny asa tsara, fa amin‟ny maha Andriamanitra Azy, ary kianiny kosa izay rehetra tsy mety: Apokalypsy 2:20 « Kanefa manan-teny aminao Aho, satria ianao mandefitra amin’ilay vehivavy Jezebela, izay milaza ny tenany ho mpaminanivavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin’ny sampy. »
Iza moa ilay vehivavy Jezebela?
Ny” code” vehivavy dia ny fiangonana, ka ity vehivavy Jezebela ity raha ny tantara no jerena, dia ahitana fa hoe: vehivavy jentilisa izy ity, no nalain‟ny mpanjaka ho vady. Ary ny raharaha tamin‟io, dia nanana fahefana ity vehivavy ity, ka izay rehetra nikitikitika ny tombotsoan‟ny mpanjaka, dia naripak‟ity vehivavy ity avokoa.
(Hitantsika izany ao amin‟ny 1 Mpanjaka 18 sy 19): Nisy zavatra nitranga izany teo amin‟i mpaminany Elia, izay nitenenan‟ity vehivavy ity mihitsy, fa tokony ho vonoina ity mpaminany ity. (Ohatra iray ity raisina ity), izay ahitantsika fa nisy fifampiantsiana mihitsy teo amin‟i Elia sy ireo mpaminanin‟i Bala, ka ho vonoina izay resy.
1 Mpanjaka 18:21 – 24 «21 Ary dia nankeo amin’ny olona rehetra Elia ka nanao hoe: Mandra-pahoviana no hiroa saina ianareo? Raha Jehovah no Andriamanitra, manaraha Azy; fa raha Bala kosa, dia manaraha azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory. 22 Dia hoy Elia tamin’ny olona: Izaho dia izaho irery ihany no sisa amin’ny mpaminanin’i Jehovah; fa ny mpaminanin’i Bala kosa dia dimam-polo amby efa-jato lahy. 23 Koa aoka ireo no hanome vantotr’ombilahy roa ho antsika; ary aoka izy no hifidy ny iray ho azy, dia handrasa azy ka hametraka azy eo ambonin’ny kitay hazo, nefa tsy hasiana afo ao; ary izaho kosa hamboatra ny iray ka hametraka azy eo ambonin’ny kitay hazo, nefa tsy hasiana afo koa ao. 24 Ary miantsoa ny anaran’ny andriamanitrareo ianareo, ary izaho kosa hiantso ny anaran’i Jehovah; koa Izay Andriamanitra mamaly amin’ny afo, dia aoka Izy no ho Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe: Marina izany teny izany. » Misy fivavahana roa izany eo: ny iray manompo an‟i Bala, ary ny iray kosa manompo an‟i Jehovah. Ity Bala ity dia andriamanitry ny masoandro izy io.
Ary raha ity tantara ity no jerentsika dia ahitana fa maro tokoa ny mpaminanin‟i Bala izay miisa 450, fa ny mpaminanin‟i Jehovah kosa dia tsy misy afa tsy Elia. Nilaza ary ny mpaminany Elia, fa aoka samy hametraka ny fanatiny eo ambony kitay hazo avokoa, ny andaniny sy ny ankilany, ary samy hiantso ny andriamaniny avy, ka izay andriamanitra mamaly amin‟ny afo no ho Andriamanitra. Dia izao ny tohiny, “ianareo hoy i Elia no manao voalohany”, ary dia nanao izay fara-fahaizany mihitsy ny mpaminan‟i Bala rehetra, ary dia nisy niafara tamin‟ny fitetehana ny tenany mihitsy aza nanomboka ny maraina ka hatramin‟ny hariva. 1 Mpanjaka 18:25 – 40 «25 Ary hoy Elia tamin’ireo mpaminanin’i Bala: Mifidiana vantotr’ombilahy iray ho anareo, ka dia manamboara aloha ianareo, satria ianareo no maro; ary miantsoa ny anaran’ny andriamanitrareo, nefa aza asiana afo ao. 26 Dia naka ny vantotr’ombilahy izay nomeny azy ireo ka namboatra azy, dia niantso ny anaran’i Bala hatramin’ny maraina ka mandra-pitataovovonan’ny andro izy nanao hoe: Ry Bala ô. henoy izahay! Kanjo tsy nisy nanoina na namaly akory. Ary nihinjakinjaka tamin’ny alitara izay nataony izy. 27 Ary nony nitataovovonana ny andro, dia nanesoeso azy Elia ka nanao hoe: Miantsoa mafy ihany, fa andriamanitra izy; angamba sondrian-dresaka izy, na miavela, na nisy nalehany, na matory angaha izy ka tsy maintsy hofohazina. 28 Dia niantso mafy indray ireo sady nitetika ny tenany araka ny fanaony amin’ny sabatra sy ny lefona mandra-pahaloa-drà tamin’ny tenany. 29 Ary na dia efa nitsidika aza ny andro, dia mbola naminany ihany izy hatramin’ny fotoan’ny fanatitra hariva; nefa tsy nisy nanoina, na namaly, na nihaino azy akory. 30 Ary hoy Elia tamin’ny olona rehetra: Manatona ahy. Dia nanatona azy ny olona rehetra. Ary Elia namboatra ny alitaran’i Jehovah izay efa rava 31 ka naka vato roa ambin’ny folo, araka ny isan’ny firenen’ny zanak’i Jakoba, izay nihavian’ilay tenin’i Jehovah hoe: Isiraely no ho anaranao; 32 ary izany vato izany dia nataony alitara ho an’ny anaran’i Jehovah; ary nanao hady kely manodidina ny alitara koa izy, izay mifafy*[*Na: mahalany] voan-javatra indroan’ny famarana**[**Heb. sea] . 33 Ary nandahatra ny kitay hazo izy, dia nandrasa ny vantotr’ombilahy ka nametraka azy teo ambonin’ny kitay hazo, 34 dia nanao hoe: Fenoy rano ny siny efatra, ka aidino amin’ny fanatitra dorana sy amin’ny kitay hazo. Dia hoy koa izy: Ataovy indray izany. Dia nataony indray. Ary hoy koa izy: Ataovy indray koa izany. Ary dia nataony indray koa. 35 Ary ny rano nikorotsaka nanodidina ny alitara; ka nofenoiny rano koa ny hady kely. 36 Ary nony tamin’ny fotoan’ny fanatitra hariva dia nanatona Elia mpaminany ka nanao hoe: Jehovah ô. Andriamanitr’i Abrahama sy Isaka ary Isiraely, aoka ho fantatra anio fa Hianao no Andriamanitra amin’ny Isiraely, ary izaho no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. 37 Mihainoa ahy mihainoa ahy, Jehovah ô, mba hahafantaran’ireto olona ireto fa Hianao Jehovah no Andriamanitra, ary Hianao no mampiverina ny fony indray. 38 Dia latsaka ny afon’i Jehovah ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin’ny hady kely. 39 Ary raha nahita izany ny olona rehetra, dia niankohoka ka nanao hoe: Jehovah, Izy no Andriamanitra; Jehovah, Izy no Andriamanitra. 40 Ary hoy Elia taminy: Sambory ny mpaminanin’i Bala; aza avela hisy afa-mandositra izy na dia iray akory aza. Dia nosamborin’ny olona izy; ary nentin’i Elia ho eo amin’ny ony Kisona, ka dia novonoiny teo. »
Izany hoe: ireto mpaminany namitaka ny Isiraely sy ny mpanjaka ireto izany, dia naripaka ny farany, satria nanapotika firenena. Ka inona ary ny zavatra nitranga rehefa naheno izany ity vehivavy Jezebela vadin‟ny mpanjaka ity?: 1 Mpanjaka 19:1 – 2 «1 [Ny nandosiran’i Elia nankany an-efitra, sy ny nisehoan’Andriamanitra taminy tao Horeba, ary ny nanendrena an’i Elisa handimby azy] Dia nolazain’i Ahaba tamin’i Jezebela izay rehetra nataon’i Elia, dia ny namonoany ny mpaminany rehetra tamin’ny sabatra. 2 Ary Jezebela naniraka olona tany amin’i Elia hanao hoe: Hataon’ireo andriamanitra amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha tsy hataoko toy ny ain’ny anankiray amin’ireny ny ainao raha maraina toy izao. »
Izany hoe: ity vehivavy Jezebela ity izany raha nahare izany dia tena nilaza mihitsy hoe, tsy misy resaka mihitsy, fa tena ho vonoiko tokoa hoy izy izany lehilahy izany. Ary ity vehivavy Jezebela ity moa, dia nitaona ny olona hanompo sampy, hanao zavatra tsy manjary maro, ary dia nampihantra ny fahefany tokoa izy ity. Tranga iray hafa ihany koa ity manaraka ity: 1 Mpanjaka 21:3 – 10 «3 Fa hoy Nabota tamin’i Ahaba: Sanatria amiko eo anatrehan’i Jehovah izany! fa tsy homeko anao ny tanindrazako. 4 Ary Ahaba nankany an-trano sady malahelo no sosotra noho ny teny nolazain’i Nabota Jezirelita taminy hoe: Tsy homeko anao ny tanindrazako. Dia nandry teo am-parafarany izy ka nampihodina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina. 5 Ary Jezebela vadiny nankeo aminy ka nanao taminy hoe: Ahoana no mampahasosotra anao toy izao, no tsy mety homan-kanina ianao? 6 Dia hoy izy taminy: Satria niteny tamin’i Nabota Jezirelita aho ka nanao taminy hoe: Omeo ahy ny tanim-boalobokao hovidiko vola, na hotakalozako tanim-boaloboka hafa, raha izany no sitraky ny fonao; fa izy namaly hoe: Tsy homeko anao ny tanim-boaloboko. 7 Ary hoy Jezebela vadiny taminy: Moa ianao tokoa va no manjaka amin’ny Isiraely izao? Miarena, mihinàna hanina, ary aoka ho ravoravo ny fonao; izaho hanome anao ny tanim-boalobok’i Nabota Jezirelita. 8 Ary Jezebela dia nanoratra taratasy tamin’ny anaran’i Ahaba, ka notombohiny tamin’ny fanombohan-kasen’andriana, ary ny taratasy dia nampitondrainy ho any amin’ny loholona sy ny manan-kaja tao an-tanànany, dia ireo niara-nitoetra tamin’i Nabota. 9 Ary izao no nosoratany tao amin’ny taratasy: Miantsoa andro fifadian-kanina, ary apetraho eo anatrehan’ny olona Nabota. 10 Dia anangano roa lahy izay tena ratsy fanahy ho eo anatrehany hiampanga azy hoe: Efa niteny ratsy an’Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao. Dia ento mivoaka izy, ka torahy vato ho faty. »
Maty tokoa ity Nabota ity ny farany, rehefa nohendrikendrehan‟i Jezebela izy. Ka ity vehivavy Jezebela ity izany, dia sady jentilisa no manompo sampy ary izy ity no nanodinkodina ny lohan‟ny mpanjakan‟i Isiraely hanompo sampy, ka izay mpaminanin‟i Jehovah dia nasainy naripaka daholo na iza na iza. Ka raha mijery ny tantaran‟i Tyatira izany ianao, dia mahita fa manana toetra tsara izy, nanao asa soa maro, niorina tamin‟ny finoana an‟i Jesosy Kristy, fa saingy izy dia nanana ny toetran‟i Jezebela izay nampamono ny mpaminanin‟i Jehovah. Ka raha mijery ny tantaran‟ny fiangonana izany ianao, tao anatin‟io vanimpotoana 538 – 1517 io, dia nahita fa naripaka daholo izay rehetra nahazo anarana hoe eretika, teo amin‟ny tantaran‟ny fiangonana Ka izay sahy mijoro izany, ka manohitra ny fahefany sy ny fampianaran‟ny Tyatira, na mopera io, na frera io na olon-tsotra, dia naripaka avokoa. Io vehivavy Jezebela io dia nandripaka izay mpaminanin‟i Jehovah sahy milaza ny marina; ka raha jerena tokoa ny tantaran‟ny fiangonana tao anatin‟io 538 – 1517 io, dia na ny amperora aza dia miankohoka eo anoloan‟ny filohan‟ny Tyatira. Ka izay amperora tiany apetraka eo dia eo ary izay tiany alana eo dia alan‟ny filohan‟ny Tyatira.
Ka tsy misy resaka mihitsy izany, fa izay manohitra an‟izany fahefany izany, dia na izy dorana velona, na izy tapahina ny lohany, na izy gadraina mandram-pahafatiny. Izany hoe: tsy azo atao mihitsy izany ny manohitohitra ny fahefan‟i Tyatira io, satria nitombo dia nitombo ny heriny ary dia nanana ny toe-tsaina Jezebela tokoa izy amin‟izany, ary dia nifangaro tao tokoa izany ny fivavahana amin‟ny maty, ny fivahana amin‟ny sary sy ny sary sikotra maro isan-karazany, izany hoe resaka spirutisme moderne sy ny ocultiste dia nitambatra tao daholo. Ahoana hoy Jesosy Kristy: Apokalypsy 2:20 « Kanefa manan-teny aminao Aho, satria ianao mandefitra amin’ilay vehivavy Jezebela, izay milaza ny tenany ho mpaminanivavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin’ny sampy. »
Izany hoe: izay olona manaradia an‟ity vehivavy Jezebela ity izany, dia mihinana hena aterina amin‟ny sampy avokoa. Ka ahoana moa izany hoe: mihinana hena aterina amin‟ny sampy izany? Izao no dikany: raha toa izany ianao mamono biby ohatra, na omby, na ondry, na akoho, na vorona, ka hanaovana vavaka ivelan’Andrimanitra amin‟ny famonona iny biby iny, dia izay no atao hoe sampy. Ny ohatra ahintantsika an‟izany izao, dia ny fomba Malagasy, izay hangataham-pitahiana amin‟Andriamanitra hafa ankoatra an‟i Jehovah. Dia izay no atao hoe sampy (joro na zavatra hafa). Kanefa ity vehivavy ity izany, dia nampanao an‟izany. Apokalypsy 2:21 « Ary nomeko andro hibebahany izy, nefa tsy mety mibebaka amin’ny fijangajangany izy. »
Inona moa ny hoe fijangajangany izany?
Izany dia ilay fampifangaroana izay fivavahana tena izy amin‟ny sampy samihafa. Ka eto izany dia efa nilaza Jesosy Kristy, fa efa nomeny andro izy hibebahana, izany hoe: nomen‟i Jesosy Kristy izany izy, vanimpotoana hialany amin‟izany zavatra izany, kanefa dia tsy nety niala amin‟izany toerana misy azy izany izy. Izany hoe: tsy hiala amin‟izany toerana misy azy izany mihitsy izy izany, ka na hatramin‟izay ka hatramin‟izao, dia tsy hiala amin‟izany toetrany sy ny fombany izany mihitsy ny mponina ao Tyatira izany. Ka mba jereontsika fotsiny ohatra ireo olona manatrika ireo fombafomba maro isan-karazany miendrika sampy ireny, na ireny olona manompo sampy mivantana: ireny olona manatrika an‟ireny, dia tena mpivavaka daholo. Ka dia mba hadihadio anie ireny olona ireny, anontanio izy hoe: aiza izy no mivavaka? fa saika any Tyatira avokoa no mivavaka ireny olona ireny. Ary izay no mahatonga ny fiangonana any Tyatira ho tian‟ny olona, satria malalaka afaka manao ny zavatra rehetra any. Na izany aza, raha izany no fanankianana nahazo azy, dia nisy ihany ny torohevitra nomen‟i Jesosy Kristy azy: Apokalypsy 2:24 – 25 «24 Fa aminareo izay sisa any Tyatira, dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon’ireo hoe « sain-dalin’i Satana », dia izao no lazaiko: tsy hovesarako entana hafa ianareo; 25 kanefa izay anananareo dia tano mafy mandra-pihaviko. » Izany hoe: na dia miaina amin‟izay fiainan‟ny vehivavy Jezebela izany aza ny ao Tyatira, dia misy olona vitsivitsy ao, izay tsy ho azonao amin‟izany hoe: sady hivavaka izy no hanompo sampy izany, na hoe handeha hijangajanga izany. (Ka ny fijangajangana izay resahina eto izany, dia ilay fampifangaroana ny fivavahana tena izy amin‟ny fivavahana tsy izy, izany hoe fijangajangana ara-panahy. Fa ny ara-nofo moa izany dia efa tsy izy izany. Ary io fijangajangana ara-panahy io, no tena zavatra nampaha-tezitra an‟Andriamanitra tamin‟ny zanak‟isiraely mihitsy).
Ka misy izany ao olom-bitsy, izay tena tsy ho azonao amin‟izany fijangajangana ara-panahy izany mihitsy, (ohatra hoe hanantona ombiasa, na mpanandro, na mpisikidy na voyant na cartomacien na astrologue). Tsy ho azonao mihitsy izy amin‟izany, fa izy tena mivavaka amin‟ny fo madio mihitsy, ary izy moa ilay lazaina hoe tsy mahalala ny saindalin‟i satana. Ka inona moa izany hoe saindalin’i satana izany? Asainy sady manompo an‟Andriamanitra ianao, no asainy manompo andriamanin-kafa, izany hoe sady mitahy Andriamanitra no mitahy ny andriamanin-kafa. Ka izay toe-javatra izay no nahatonga an‟i Jesosy Kristy hilaza an‟ity fiangonana any Tyatira ity, hanao hoe: “25 kanefa izay anananareo dia tano mafy mandra-pihaviko.” Ka izay fahalalana kely izay anananao io izany, dia tano mafy, mandram-pihavin‟ilay tenin‟Andriamanitra tena marina tonga ao aminao, no tiany ho resahina io, satria i Jesosy Kristy anie Ilay Teny tonga nofo e!.
Apokalypsy 2:26 – 27 «26 Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin’ny farany dia homeko fahefana amin’ny jentilisa; 27 ary hiandry azy amin’ny tehim-by izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa noraisiko tamin’ny Raiko. »